Shacabka iyo maamulka Jubba oo $100 kun ugu deeqay dadkii ku waxyeeloobay Puntland (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 6, 2013 4:59 b 0
Garoowe, December 6, 2013 – Maamulka Jubba iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada Jubbooyinka iyo Gedo, ayaa gurmad balaaran u fidiyey dadkii wax ku noqday masiibadii duufaanta ahayd ee dhowaan ku dhufatay xeebaha iyo dhulka taaga ah ee Puntland.
Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ku jira guddiga gurmadka masiibada ee Puntland ayaa shaaciyey in la soo gaarsiiyey lacag dhan (Boqol kun iyo saddex boqol oo dollar) $100.300 dollar, taas oo bulshada iyo maamulka Jubba ay u qorsheeyeen in wax loogu qabto dadkii wax ku noqday masiibada.
?lacagtaas waan guddoonay, waana uga mahadnaqaynaa shacabka Jubbooyinka gurmadka ay u fidiyeen dadkii masiibadu haleeshay, waxaan ku shubnay kaydadkii la qorsheyey.? Ayuu yiri sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo maanta shir jaraa?id qabtay.
Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in lacagtaas xoolo loogu iibin doono dadkii ku cayroobay duufaantii xooganayd ee horaantii bishii hore ku dhufatay Puntland.
Guddiga ayaa sheegay in howlaha gurmadka ah ay weli ka socdaan guud ahaan meelaha Soomaalidu joogto, iyadoo lacagta weli lagu soo shubayo kaydad ka furan bankiyada iyo xawaaladaha oo horay loo qorsheeyey, dadkii dufaanta ku cayroobay ayaa dib dib u dejin loo samaynayaa.
Dowladda Puntland iyo gurmadka masiibada ayaa dadka iyo maamulka Jubba uga mahadceliyey deeqda dhaqaale ee ay gaarsiiyeen ugu yabooheen dadkii masiibada wax ku noqday, culimada ayaa u duceeyey shabka Jubbooyinka iyo Gedo.
Dhegeyso:- shir jaraa?id oo uu Garoowe ku qabtay sheikh Maxaxmuud Xaaji Yuusuf